विद्यालय नाटक महोत्सवमा ‘मेहनत र परिश्रमको फल’, सोमबार ‘दशैं’ मञ्चन हुँदै
विराटनगर, २२ भदौ । आरोहण–गुरुकुल विराटनगरमा जारी विद्यालय नाटक महोत्सवमा आइतबार ‘मेहनत र परिश्रमको फल’ मञ्चन भएको छ । विराटनगरको श्री अन्नपूर्ण एकेडेमीले तयार पारेको नाटक हाटखोलास्थित सुशीला कोइराला नाटक घरमा मञ्चन गरिएको हो ।
सोही विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत अपेक्षा तामाङले कुटुनी बुढीको कथालाई नाट्य रुपान्तरण गरि निर्देशन गरेकी हुन् । उनलाई आभास बस्नेत र उत्सव भट्टराईले सहयोग गरेका छन् । नाटकले परनिर्भरताविरुद्धको कथा बोलेको छ । पछौटेपना र भोलिवाद्ले विकृत समाजका परिवेशलाई नाटकमा प्रस्तुत गरी आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न एक जना वृद्धाले प्रोत्साहन गरेको संघर्षलाई नाटकमा देखाइएको छ ।
यसअघि हिजो विराटनगरकै सत्यनारायण माविले नाटक मञ्चन गरेको थियो । महोत्सवामा नाटक मञ्चन गर्र्न पाउँदा निकै उत्साहित र खुशी भएको विद्यार्थीहरुले बताए । आरोहण–गुरुकुल विराटनगरको आयोजना तथा विराटनगर महानगरपालिकाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सुरु भएको नाटक महोत्सव भाद्र २९ गतेसम्म चल्नेछ । नाट्य गतिविधिले तीब्रता पाओस् भन्ने हेतुले महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
महोत्सवमा विभिन्न ९ विद्यालयले दैनिक अपरान्ह ४ बजे नाटक मञ्चन गर्दैछन् । सो महोत्सवमा सोमबार पेरागन एकेडेमी मा.वि.ले “दशैं” मञ्चन गर्नेछ । यस्तै सेन्ट जोसेफ स्कुलले भदौ २४ गते मंगलबार “लक्ष्मीपूजा”, सप्तकोशी से.बो. स्कुलले भदौ २५ गते बुधबार “छाउपडी”, बुढानिलकण्ठ से.ई.स्कुलले भदौ २६ गते बिहिबार “नासो”, लिलिपुट प्रिमियर इलिमेन्ट्री स्कुलले भदौ २७ गते शुक्रबार “प्रधानमन्त्री”, श्री श्री रविशंकर विद्या मन्दिरले भदौ २८ गते शनिबार “चण्डालिका एक अनन्त प्रेम कहानी”र रंगेली नगरपालिकाको रञ्जनी एकेडेमिक ई. टिचिङ स्कुलले भदौ २९ गते “परिवेश” मञ्चन गर्दै नाटक महोत्सव समापन हुनेछ । नाटक महोत्सवमा सांग्रिला बुक्स र वाईवाई चाउचाउले सहयोग गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसबाट नयाँ संक्रमित हुनेभन्दा निको हुने बढे
‘माइकल अधिकारी’मा रवि लामिछाने पनि
मलाई लिएर खेल्न डराउँछ पीएसजी : नेयमार
पार्लरबाट कपाल तथा छालासम्बन्धी रोगहरू निम्तिन सक्छ
सुनको मूल्य अहिलसम्मकै महँगो, अझै बढ्नसक्ने सम्भावना
अस्ट्रेलियामा विमान एक-आपसमा ठोक्किँदा चार जनाको मृत्यु